ဒြပ်စင်လူ့အဖွဲ့အစည်း - ရှက်ဖီးရဲ့အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာလူငယ်ဒါန
ကျနော်တို့လူငယ်များနှင့်အားနည်းချက်လူကြီးများမှဖွံ့ဖြိုးရေး, လူမှုရေးအရေးယူမှုနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုပို့, ရှက်ဖီးအခြေစိုက် non-အမြတ်လူငယ်ပရဟိတဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ဦးအပြုသဘောအပြောင်းအလဲလုပ်သူတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်မြှင့်နှင့်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရန်စံပြဖြစ်လာမှလူငယ်များလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
သငျသညျအသက် 15 Are - 17 နှင့်သင့်နွေရာသီထဲကအများဆုံးရရန်ရှာဖွေနေပါသလား
အလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံအတွက် NCS Join! လူသစ်ဖြည့်ဆည်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုရှည်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေ၏ CV ကိုအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုရဖို့။
သင်တစ်ဦးသားသို့မဟုတ်သမီးရှိသည် Do, ဒါမှမဟုတ်သင်ကနုပျိုလူတစ်ဦးပြုစုကြသလဲ
အဆိုပါ 2019 NCS အစီအစဉ်ကိုသူတို့နွေရာသီနှင့်သူတို့မေ့လျော့မည်မဟုတ်တစ် skillset ပေးနိုင်ကြောင်းဘယ်လိုထွက်ရှာပါ။
အဆိုပါ NCS အစီအစဉ်သစ်ကိုတှေ့အကွုံမြားမှသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးအသစ်များကိုကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အသစ်အသက်တာရှည်မိတ်ဆွေများကိုလုပ်နိုင်ကြောင်းကိုမည်သို့ထွက်ရှာပါ။
ကျနော်တို့3core ကိုယုံကြည်မှုများရှိ
Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူမယုံနိုင်စရာရရှိလူငယ်များ၏အချို့ဥပမာများပါဝင်သည်: အားကစားရုံအိတ်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုစျေးကွက်ငျးကုအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်, အလုပ်ရုံဒီဇိုင်းနှင့်အပြေး, အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပြင်းအထန်, မသန်စွမ်း access ကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ဒါဒါအများကြီးပို။ အဘယ်အရာကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်, ဤဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများရုံရိုးရာ '' မြင့်သောအောင်မြင်မှုရရှိ '' ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအားဖြင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကရှက်ဖီးနှင့်က South Yorkshire ၏လူငယ်များကဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ပို. ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းလူငယ်များ paid အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သူများအနေဖြင့်တိုးတက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများအားလုံးသည်တိုင်းအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူငယ်များရှိသည် - အယူအဆနဲ့ဒီဇိုင်းကနေဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့အာကာသနှင့်သူတို့အပြုသဘောအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအခန်းကဏ္ဍအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများကို၏ညှနျကွား၏နည်းဗျူဟာပုံစံသွင်းသွင်းသောငါတို့လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးလူငယ်ပရဟိတအဖြစ်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်၏စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ရူပါရုံကိုနှင့်ကမ္ဘာအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေလက်နက်ဖြစ်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေလိုလျှင်, ထိတွေ့ရပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့လုပ်နေလုပ်နေတစ်ခုခုပေါ်တွင်သင်လုပ်နေလုပ်နေတစ်ခုခုပေါ်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်ရှိမရှိ, သင့်စိတ်ကူးများနှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို Call - 0114 2999 210
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး - hello@elementsociety.co.uk
EFL ခွငျး // NCS ခွငျး // ကက်ဘိနက်ရုံး // ရှက်ဖီးအနာဂတ် // BIG ထီ // အမှန်တကယ် NEET // ရှက်ဖီး HALLAM // ရှက်ဖီး-UNIVERSITY OF